ပါတေး နဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ အာဆင်နယ် ၊ လစာလျော့ယူလိုက်ကြတဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ပါတေး နဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ အာဆင်နယ် ၊ လစာလျော့ယူလိုက်ကြတဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
April 23, 2020 April 23, 2020 - by Editor
ပြင်သစ် ထိပ်သီး ကလပ် PSG ဟာ တိုက်စစ်မှုးလေး ကိုင်လီယန် အမ်ဘာပေ ကို သူတို့ လိုလာတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကို မရရှိ ခဲ့ပါက အစော တလျှင် ရောင်းထုတ် သွားမှာ မဟုတ်ဘဲ ( ကစား သမား ဘက် က စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးခဲ့လျှင်တောင်မှ ) အသင်းမှာ ဆက်လက် ထိန်းထား ဖို့ အစီ အစဉ် ရှိနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်း ကစား သမားတွေ ဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ခ လစာ ၁၀% ကို ၄ လ တိတိ လျော့ယူ ဖို့ သဘောတူညီ ခဲ့ကြပြီ လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ကလပ် အသင်း ဘက်က ၃၀% လျော့ယူပေးဖို့ အဆို တင်သွင်းခဲ့ တာဖြစ်ပေမယ့် ညှိနှိုင်းမှု တွေ ပြုလုပ် အပြီးမှာတော့ ၁၀% နဲ့ အဆင်ပြေ ခဲ့ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကွင်းလယ်လူ သောမတ်စ် ပါတေး ရဲ့ ဖခင် ကတော့ အာဆင်နယ် ဟာ သူ့ရဲ့ သား ဖြစ်သူ နဲ့ ဆွေးနွေးမှု ရှိခဲ့ တယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် နိုင်ငံ အတွင်းက မြင်းပြိုင်ပွဲတွေ ဟာ နောက် လ အတွင်း မှာ ပြန်လည် စတင် ဖို့ စီစဉ် နေပြီ ဖြစ်ကာ ပရိသတ် တွေ မပါဘဲ ယှဉ်ပြိုင် စေမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် ဘောလုံး အဖွဲ့ ချုပ် FA ဟာ ဗြိတိန် က ရုပ်သံ လွှင့် အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ညှိနှိုင်း နေပြီး လက်ရှိ ရာသီ ကို ကွင်းပိတ်ပြီး ဆက်လက် ကစားဖြစ် ခဲ့ပါက ပွဲစဉ်အားလုံး ကို အခမဲ့ ပြသ နိုင်ဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် အသင်း ဟာ အသင်းသားတွေ ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု သတင်းကို လူအများကြား ပြောဆို ခဲ့တဲ့ လူကာကူ အပေါ် စိတ်ဆိုး ဒေါသ ထွက်ခဲ့ ကြတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ လူကာကူ ကလည်း သူ့ရဲ့ မဆင် မချင် ပြောဆိုမိ မှု ကြောင့် ပြန်လည် တောင်းပန် ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အေစီ မီလန် တိုက်စစ်မှုးကြီး ဇလာတန် အီဘရာ ဟီမိုဗစ် က တော့ ဆွီဒင် ကလပ် ဟမ်မာဘီ မှာ ဆက်လက် လေ့ကျင့် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရင်းနက် အသင်းဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် က စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ 17 နှစ် အရွယ် ကွင်းလယ် ကစား သမားလေး အက်ဒွာဒို ကာမာဗင်ဂါ အတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကို ပေါင် ၅၃ သန်း သတ်မှတ် ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မေဂျာလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကို ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အင်တာ မိုင်ယာမီ အသင်း ရဲ့ ပိုင်ရှင် ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း ဟာ အသင်း ဟောင်းရီးရဲမက်ဒရစ်ဥက္ကဌပီရက်ဇ်ထံဆက်သွယ်ပြီး ရီးရဲ ကွင်းလယ်လူ ဟာမက် ရိုဒရီဂွက် အကြောင်းကို စုံစမ်း မေးမြန်းခဲ့ တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် တောင်ပံ ကစား သမား ဂါရတ်ဘေး နဲ့ မိသားစု တို့ ဟာ ဝေးလ် နဲ့ စပိန် နိုင်ငံ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေ အတွက် ပေါင် ၁ သန်း ကို လှူဒါန်း သွားခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အသင်းကလည်း အင်္ဂလန် နိုင်ငံ အတွင်းက ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့အန်ဖီးလ်ကွင်းမြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာNHSYNWAဆိုတဲ့စာလုံးတွေကို ပုံဖော် ဂုဏ်ပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် အမျိုးသမီး လက်ရွေးစင် အသင်း နည်းပြ ဖိလစ် နဗီးလ် ဟာ လက်ရှိ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမယ့် ၂၀၂၁ အပြီး မှာ လက်ရွေးစင် နည်းပြ ရာထူး ကနေ ထွက်ခွာမယ် လို့ အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
UEFA ဟာ ချန်ပီယံ လိဂ် နဲ့ ယူရိုပါ လိဂ် တွေ ကို သြဂုတ်လ ထဲ မှာ အပြီး ကျင်းပ ဖို့ စီစဉ် ထားပြီး ပြည်တွင်း အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲတွေ အနေနဲ့ ဇူလိုင် လကုန် ထိ ပြန်လည် စတင် နိုင်ခြင်း မရှိပါက လက်ရှိ ရာသီ ကို ဖျက်သိမ်း ဖို့ ညွှန်ကြား ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်း ဟာ နာပိုလီ တိုက်စစ်မှုး မီလစ် ၊ ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ အာသာ မယ်လို တို့ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရိုးမား အသင်း ကလည်း အဲဗာတန် တိုက်စစ်မှုး မွိုက်ကင်း ကို ခေါ်ယူ ရာမှာ အသင်းရဲ့ လူငယ် တောင်ပံ ကစား သမားလေး ကန်ဂျစ် အန်ဒါ ကို ထည့်သွင်း အလိုက်ပေး ဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကန်ဂျစ် အန်ဒါ ကို နာပိုလီ ၊ ဆီဗီးလား နဲ့ အေစီ မီလန် တို့ က ခေါ်ယူ ဖို့ စောင့်ကြည့် နေကြ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ဟာ အင်တာ တိုက်စစ်မှုး အီကာဒီ ကို ခေါ်ယူပါက ငွေသား သီးသန့် မပေးချေ လိုပဲ ကွာဒရာဒို ကို အလိုက်ပေး ထည့်သွင်း သွားဖွယ် ရှိတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ သူတို့ရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ် ဖြစ်တဲ့ ဂျေဒန် ဆန်ချို ကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ အပြိုင် ကမ်းလှမ်း ဖို့ စီစဉ် ထားတာ ကြောင့် ဘာကာကွင်းလယ်လူ ကော်တင်ဟို ကို အငှား ဖြင့်သာ ခေါ်ယူ လိုတယ်လို့ လည်း သိရပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ကနေဗလင်စီယာကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဘရာဇီးနောက်ခံလူဂါဘရီရယ် ပေါ်လစ္စတာ ကိုအင်္ဂလန်မှာပြန်လည်မြင်တွေ့ရဖွယရှိပြီးပရီးမီးယားလိဂ် အသင်း ၂ သင်း က ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဝက်ဖိုဒ့် အသင်း ကစား သမားတွေဟာ သူတို့ ရရှိမယ့် လုပ်ခ လစာရဲ့ ၃၀% ကို ဆိုင်းငံ့ ပေးထား ကြမယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။